I-Klara ° ipholile, i-10 min ukuhamba ukusuka kumbindi wedolophu endala - I-Airbnb
I-Klara ° ipholile, i-10 min ukuhamba ukusuka kumbindi wedolophu endala
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMarijana
I-Apt Klara yindawo entsha, eyonwabisayo kwindlu yosapho, malunga nemizuzu elishumi ngokuhamba ukusuka kumbindi wedolophu endala.Olona lwandle lukufutshane lukumgama oziikhilomitha ezi-2 kuphela.
I-Apt inikezela ngazo zonke izinto eziyimfuneko ukuze uhlale ukhululekile kule dolophu intle ... Wamkelekile!
KWAKHONA qaphela ULUHLU LWAM 2!
NdinguMarijana, wamkelekile ekhayeni lam!
Usapho lwam luhlala ngaphezulu kweflethi kwaye ukuba ufuna nantoni na yiza unkqonkqoze.
Le ndlu inegumbi elinye lokulala elinebhedi ephindwe kabini, igumbi lokuhlala elinesofa enokuguqulwa ibe yibhedi ephindwe kabini, indawo yokutyela kunye nekhitshi, kunye negumbi lokuhlambela.Ngaphambi kwendlu kukho indawo encinci entle enetafile kunye nezitulo, apho unokuhlala khona kwaye uphumle.
Indawo yokupaka ilungile ngakwiflethi.
Indlu ibekwe kufutshane nedolophu endala, malunga nokuhamba ngomzuzu we-10 ukuya kuyo yonke into, ivenkile yokutya, ikhemesti, iindawo zokutyela kunye nokunye.
Ukufika apha kulula. Bus: ukuba ufika ngebhasi isikhululo sebhasi sikufutshane kakhulu, luhambo lwemizuzu eyi-10.Indiza: ukuba uza ngenqwelomoya kwisikhululo seenqwelomoya iSplit, siphakathi kweSplit neTrogir (4 km ukusuka kwimpahla).Ukukhwela iteksi kufutshane kakhulu. Usenokukhwela ibhasi (umgca 37, ulwalathiso lweTrogir). Isikhululo sebhasi siphambi kwesikhululo seenqwelomoya (imizuzu embalwa uhamba ukusuka kwisango elikhulu).
Imisebenzi: Idolophu endala yaseTrogir ineendawo zokutyela ezininzi ezintle. Iilwandle zikufutshane (kuqesha ibhayisekile/isikuta, izikhephe zeeteksi).Olona lwandle lukufutshane luyi-2km kude. Kukho iirenti zebhayisekile, iirenti zezithuthuthu, imarike yangaphandle, iivenkile, ii-arhente zabakhenkethi (ukhenketho lwamaphenyane, ukukhwela amanzi, ibhola yepeyinti, ukukhwela intaba njl.njl), khawundibuze kwaye ndiza kukunika isikhokelo malunga nokuba ungaya phi.
I-Apartment: I-air conditioning ikuwe, kodwa ngokwesiqhelo iqondo lobushushu kuyo limnandi kakhulu, nangeemini ezishushu kakhulu.Ngokuhlwa, usenokungayifuni. Vula nje iifestile kwaye ukhuphe izivalo.Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ukwenza phantse naluphi na uhlobo lokutya. Une-smart TV enezitishi ezininzi (NETFLIX, HBO, iitshaneli zezemidlalo,...).Iilinen kunye neetawuli zinikezelwe, nazo.
Ngaphambi kwendlu kukho indawo encinci entle enetafile kunye nezitulo, apho unokuhlala khona kwaye uphumle.
4.90 · Izimvo eziyi-230
Le ndlu ibekwe kwindawo enobuhlobo, ijikelezwe zizindlu zosapho.
Uya kuba namava okuhlala kwidolophu encinci yaseDalmatian, ejikelezwe ngabantu basekhaya.
Ikumgama wokuhamba ukusuka kumbindi wedolophu endala, Ikufutshane nayo yonke into, hayi kanye embindini, kodwa igqibelele ngokupheleleyo kwindawo ethe cwaka kwaye isasondele ngokwaneleyo ukuze uphonononge yonke into ngeenyawo.
Umbuki zindwendwe ngu- Marijana